မိစ္ဆာဝါဒ ကွင်းဆက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » မိစ္ဆာဝါဒ ကွင်းဆက်များ
Posted by Nan Shin on Oct 9, 2011 in Education | 25 comments
နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့မှ အဓမ္မ၀ါဒအဖြစ် ၀ိနိစ္ဆယချ၊ ဆုံးဖြတ်ပြီးသော မိစ္ဆာဝါဒများကို လေ့လာကြည့်သောအခါ အချို့သော မိစ္ဆာဝါဒများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်သွယ်မှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဥပမာ- ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ-၏ မိစ္ဆာဝါဒအချို့နှင့် ရေတာရှည် ဦးမာလာဝရ၏ ၀ါဒ၊ ဦးပညာဝံသ၏ ဓမ္မနီတိဝါဒ-တို့မှ အချို့သော မိစ္ဆာဝါဒများ တူညီနေမှု။ တဖန် ယခုနောက်ပေါ် မိုးပြာဂိုဏ်း၏ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ-နှင့် ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒစာအုပ်မှ ရေးသားချက်များသည် အထက်ပါ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌစသော အဓမ္မ၀ါဒများနှင့် ထပ်တူနီးပါး တူညီနေသည်ကို တွေ့ရ၏။
မိုးပြာဂိုဏ်းသည် လျှို့ဝှက်သောနည်းဖြင့် စည်းရုံးဟောပြောမှု ဖြန့်ချိမှု ပြုသဖြင့် သာမန်လူထု သိပ်မသိ၊ သိသောအချိန်တွင်လည်း မိစ္ဆာဝါဒ-ဟု တပြိုင်နက် သိလိုက်ရ၏။ ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒပါ အယူဝါဒများကို ကား တရားဝင်ဖြန့်ချိထားသော စာအုပ်ဖြစ်သဖြင့် မိစ္ဆာဝါဒများဟု မထင်ကြ။ ဟိုကဒီက ပြောကြသည့်တိုင် အနည်းအကျဉ်း လွဲချော်မှု-ဟု ထင်ကြ၏။ ထိုသို့ထင်သူများအတွက် ထိုစာအုပ်ပါ ၀ါဒများသည် အနည်းအကျဉ်း မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုသက်သက် မဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ ပညာရှိများ နှစ်လုံးစိတ်ဝမ်း မအေးချမ်းနိုင်ဘဲ စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရ၊ အော့နှလုံးနာခဲ့ရသော မိစ္ဆာဝါဒများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိသာအောင် နှိုင်းယှဉ်ပြဖို့ လိုမည်ထင်ပါသည်။ လူသိများ ထင်ရှားသော ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ၀ါဒနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြပါမည်။
(၁) လူသေလျှင်လူသာဖြစ်သည်ဟူသော ၀ါဒ
တောင်တွင်းကြီး ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ-၏ လူသေလူဖြစ်စာအုပ်မှ-
(က) လူသားဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ သေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် အကယ်စင်စစ် ဖြစ်ခွင့် ဖြစ်စရာ ဖြစ်ဖို့အလားအလာများ ရှိခဲ့သေးလျှင် လူမှတစ်ပါး အခြားဘာမှ ဖြစ်စရာ မရှိ။ (လူသေလူဖြစ်စာအုပ် – ၄)
(ခ) လက်ရှိကမ္ဘာလောကတွင် အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သော အန္တိမအခြေအနေသို့ ရောက်၍နေသော လူသားသည် နောက်သို့ ပြန်ဆုတ်၍ ဖုတ်နှင့်ပြိတ္တာ၊ တစ္ဆေနှင့်မင်စာ၊ ငရဲကောင်နှင့် တိရစ္ဆာန်သတ္တ၀ါများ ဖြစ်ရန်အကြောင်း လုံးဝ မရှိတော့ချေ။ (လူသေလူဖြစ်- ၃၃၁)
ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ- စာအုပ်မှ–
(က) တိရစ္ဆာန်ဘုံသည် မကောင်းမှုပြုသော သူတို့၏ လားရာ အပါယ်ဘုံတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓစာပေများ၌ ပြဆိုထားရကား ဗုဒ္ဓသည် ဘုရားမဖြစ်မီက ဘ၀ပေါင်းများစွာ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့သည် ဆိုခြင်းမှာ အကြောင်းယုတ္တိမရှိချေ။ ဤနေရာ၌ အောက်ပါ ဗုဒ္ဓဒေသနာကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်၏။
“ရဟန်းတို့၊ မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ မျက်စိကန်းသော လိပ်တစ်ကောင်သည် ရှိ၏။ ထိုလိပ်ကန်းသည် အနှစ်တရာလွန်မှ တစ်ကြိမ်သာလျှင် ရေပေါ်သို့ ပေါ်တက်၏။ ထိုလိပ်ကန်းသည် လေတိုက်သောကြောင့် ထိုမှဤမှ လွင့်မျောနေသော ထမ်းပိုး၌ လည်ပင်းကို လျှင်မြန်စွာ စွပ်မိရာသေး၏။ အပါယ်ဘုံရှိ သတ္တ၀ါတို့သည် လူ၏အဖြစ်ကို ရခြင်းငှါ အလွန်ခဲယဉ်း၏။ အကြောင်းမူ အပါယ်ဘုံတို့၌ တရားကျင့်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်း တို့သည် မရှိကုန်။ တိရစ္ဆာန်တို့သည် အချင်းချင်း စားကြကုန်၏။ အားနည်းသော သတ္တ၀ါကို အားကြီးသော သတ္တ၀ါက စားလေ့ရှိ၏။” (မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ ဗာလပဏ္ဍိတသုတ်)
ဤဒေသနာအရ တိရစ္ဆာန်သည် လူ့ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းရန် ထိုမျှခဲယဉ်းပါက ဗုဒ္ဓသည် ဘ၀ပေါင်းများစွာ တိရစ္ဆာန်အဖြစ်ဖြင့် ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်ဆိုသော စကားမှာ အခြေအမြစ် မရှိလှချေ။ (စာ-၁၅၇-၈)
(ခ) စင်စစ် သေပြီးနောက် လူကတိရစ္ဆာန်အဖြစ်သို့သော်လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်က လူအဖြစ်သို့သော် လည်းကောင်း ပြောင်းလဲသည်ဆိုခြင်းမှာ သဘာဝနိယာမနှင့် ဖီလာဖြစ်၏။ (စာ-၁၅၈)
(၂) အဘိဓမ္မာ ဘုရားဟောမဟုတ်
အဘိဓမ္မာကိုလည်း ဘုရားဟောမဟုတ်ကြောင်း ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ အဖွဲ့က အောက်ပါအတိုင်း ဆိုကြ၏။
(က) တစ်နည်းကြည့်ပြန်လျှင် ပထမသံဂါယနာတင်တွင် ဓမ္မနှင့်ဝိနယကို အာဂုံရွတ်ဆိုကြသည်။ ဒုတိယ တတိယတို့သည်လည်း အလားတူပင် အာဂုံရွတ်ဆိုကြသည်။ အဘိဓမ္မာ မပါဝင်သေးပေ၊ စတုတ္ထသံဂါယနာ တင်၏ နောက်ပိုင်းကျမှ အဘိဓမ္မာဟူ၍ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (ဗုဒ္ဓ၀ါဒအခြေခံသင်တန်း၊ ၇၀)
(ခ) သီဟိုဠ်ခေတ် စောစောပိုင်းကပင် အဘိဓမ္မာပိဋကမှာ ထင်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ထေရ၀ါဒီတို့၏ အဘိဓမ္မာစာပေစုသည် ပိဋကတစ်ဆူအဖြစ် စုစည်းတည်တန့်နေချိန်မှာ တတိယသံဂါယနာ တင်ချိန် (ဘီစီ-၂၄၄)ထက် နောက်မကျနိုင်ချေ၊ သို့စင်လျက် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသမထေရ်သည် ဗုဒ္ဓဘုရားသခင် တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ ၀ါတွင်သုံးလတိုင် ဟောကြားခဲ့သော အဘိဓမ္မာ ၇-ကျမ်းကို (ဗုဒ္ဓမတညူ) ဘုရားဉာဏ်ဆောင်၍ ရေးသားသည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံထားကြခြင်းမှာ ထားသူတို့၏ သက္ကာယအစွဲမျှသာ ဖြစ်ရချေမည်။ (၎င်းစာ- ၇၈)
(ဂ) ယင်းအဘိဓမ္မာ ၇-ကျမ်းကို ဗုဒ္ဓဘုရားသခင် တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ ဟောသည်ဟူသော အချက်မှာ အဋ္ဌကထာဆရာ ရှင်ဗုဒ္ဓဃောသ၏ ထွင်လုံးပုံပြင်မျှသာဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလှပေသည်။
ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒကျမ်းပြု ဦးအေးမောင်ကလည်း အောက်ပါအတိုင်း သံယောင်လိုက်ကာ ထောက်ခံရေးသားခဲ့၏။
(က) အဘိဓမ္မာကျမ်းများသည် ပိဋကတ်သမိုင်း၌ နောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာသော ကျမ်းများဖြစ်ကြောင်း ယူဆရန်အထောက်အထားများ ရှိ၏။ ပထမနှစ်ကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်သော ပါဠိတော်များတွင် အဘိဓမ္မာ ပါဝင်သည်ဟု ၀ိနည်းစူဠ၀ါနှင့် မဟာဝင်၊ ဒီပ၀င်ကျမ်းများ၌ ပြဆိုမထားချေ။ (ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ-နှာ-၁၉)
(ခ) အချို့သောပါဠိတော်တို့၌ အဘိဓမ္မာဟူသော ပုဒ်ကို တွေ့ရ၏။ သို့ရာတွင် သုတ္တန်ပိဋကတ်၌လာသော ထို“အဘိဓမ္မာ”သည် လက်ရှိအဘိဓမ္မာ ခုနစ်ကျမ်းကို မရည်ညွှန်းဘဲ သုတ္တန်ဒေသနာ များမှ နက်နဲသော တရားကို ဆိုလိုဟန်ရှိ၏။ ဗုဒ္ဓဒေသနာများကို သုတ္တ-ဂေယျ-ဂါထာ-ဇာတက စသည်ဖြင့် အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၌ ကိုးမျိုးခွဲခြားထားရာ ဥပမာ- ဇာတကသည် လက်ရှိ ၅၅၀- ဇာတ်နိပါတ်ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ နိကာယ်များမှ အချို့ဝတ္ထုများကို ရည်ညွှန်း၏။ ထိုနည်းအတူ သုတ္တန်ပိဋကတ်၌ တွေ့ရသော အဘိဓမ္မာ သည် သုတ္တန်ဒေသနာတော်များကို အမျိုးအစားခွဲခြားရန် သုံးစွဲသော စကားဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ (နှာ-၁၉)
(ဥပမာ- ဇာတကသည် လက်ရှိ ၅၅၀- ဇာတ်နိပါတ်ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ နိကာယ်များမှ အချို့ဝတ္ထုများကို ရည်ညွှန်း၏။-ဟု ဘယ်ပထွေးက ပြောသည်မသိ၊ “အပဏ္ဏကဇာတကာဒီနိ ပညာသာဓိကာနိ ပဉ္စဇာတကသတာနိ `ဇာတက`န္တိ ဝေဒိတဗ္ဗံ။ -“အပဏ္ဏဇာတ်အစရှိကုန်သော ငါးဆယ်အလွန်ရှိကုန်သော ငါးရာသောဇာတ်တော်တို့ကို ဇာတက-ဟူ၍ သိအပ်၏။”ဟု အဋ္ဌကထာတွင် ဆို၏။ ဥပမာပေးတာတောင် တလွဲ)
ဤသို့လျှင် ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒစာအုပ်သည် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ၀ါဒများနှင့် တူညီနေပုံ၊ လူသေလူဖြစ်ဝါဒကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နေပုံကို မှန်းဆနိုင်လောက်ပါပြီ။ ဆက်လက်နှိုင်းယှဉ်ပြပါဦးမည်–
(၃) သံဂါယနာခြောက်တန်ကို ပေါ့တန်သေးသိမ်စေမှု
မိမိတို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းတွင် သံဂါယနာ- တင်ခြင်းကိစ္စသည် အထူးအရေးပါလှ၏။ သံဂါယနာ များမရှိခဲ့လျှင် ထေရ၀ါဒ-ဟူ၍လည်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မှန်၏၊ ထေရ၀ါဒဟူသည် ပထမသံဂါယနာ တင်တော်မူသော အရှင်မဟာကဿပ-စသော မထေရ်ကြီးများ၏ လက်ခံသတ်မှတ်အတည်ပြု ထားသည့်အတိုင်း မဖြုတ်မနှုတ် မဖြည့်မစွက်ဘဲ လိုက်နာကျင့်သုံးသော ၀ါဒဖြစ်၏။
သို့ရာတွင် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးအေးမောင်-စသော မိစ္ဆာဝါဒီတို့သည် သူတို့၏ ၀ါဒနှင့် ထေရ၀ါဒပိဋကတ်သည် ကျောချင်းကပ် ဖြောင့်ဖြောင့်ဆန့်ကျင်နေရကား ထေရ၀ါဒပိဋကတ်သည် ပထမသံဂါယနာတင်စဉ်ကအတိုင်း မပြုမပြင် စင်စင်ကြယ်ကြယ်ရှိသည်ဟု လက်မခံနိုင်ကြဘဲ ဗုဒ္ဓဓမ္မကို ထိခိုက်စေနိုင်သော မိစ္ဆာဝါဒများ အနှောက်အယှက်များ ပေါ်ပေါက်လာတိုင်း ဗုဒ္ဓဓမ္မကို ကာကွယ်ရန် သံဂါယနာတင်တော်မူကြသော အရိယာမထေရ်ကြီးများကိုမှ အားမနာဘဲ မိုက်ရိုင်းသူများပီပီ သံဂါယနာ-ဟူသည် ဘာမျှအရေးမပါလေဟန် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ကြံရေးသားကြကုန်၏။
(က) တတိယသံဂါယနာတင်ပွဲ၌ ပိဋကတ်သုံးပုံဟူ၍ ဖြစ်လာသည်မှာ ရှင်မောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿမထေရ် သည် သူရေးသားသော ကထာဝတ္ထုကျမ်းကို ထည့်လို၍ အဘိဓမ္မာ ၇-ကျမ်းဟု တင်သွင်း သံဂါယနာတင်ခဲ့ကြဟန် ရှိလေသည်။
ဤတတိယသံဂါယနာ၌ အပြိုင်ဟူ၍ ထင်ရှားတင်ရန်အကြောင်း မပေါ်ပေါက်တော့ချေ၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အသောကမင်းကြီးက အကွဲကွဲသော သံဃာများ၏ အလိုသို့လိုက်၍ အများကြိုက်ဖြစ်စေရန် စုပေါင်းပြီး တင်လိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပိဋကတ်မှာ ဤသံဂါယနာမှစ၍ ဗြဟ္မဏဟောနှင့် ဗုဒ္ဓဟောတို့ အတိအလင်း တရားဝင် ရောထွေးလာတော့၏။ ထေရ၀ါဒီဂိုဏ်းတို့က မကျေနပ်သော်လည်း မင်း၏အာဏာကို မဆန့်ကျင်လိုသဖြင့် လိုက်လျောခဲ့ရ၏။ ဤအမှား၏ ဒဏ်ကို အစဉ်အဆက် သာသနာသမိုင်းတစ်လျောက် အမွေခံခဲ့ရ၏။ (နိကာယ်၏ နိကာယ်သမိုင်းကျောက်တိုင်မှ)
ဦးအေးမောင်၏ ပရမ်းပတာ ရေးသားချက်များကိုလည်း ရှုပါဦး။
(က) သုတ္တန်နှင့် ၀ိနည်းပိဋကတ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မရောက်မီက လေးကြိမ်တိတိ သင်္ဂါယနာတင်ပြီး ဖြစ်သည်မှန်၏။ သို့ဖြစ်စေကာမူ ထေရ၀ါဒသမိုင်း၌ ထင်ရှားသော သင်္ဂါယနာလေးခုသည် ပါဠိပိဋကတ်ကို လေ့လာစိစစ်သော သုတေသီပညာရှင်တို့၏ အမြင်အားဖြင့် များစွာအရေးပါလှသည် မဟုတ်ချေ။
(ခ) အခြားစဉ်းစားရန်ရှိသည်ကား သင်္ဂါယနာတင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရဟန်းသံဃာ တစ်စုတစ်ဖွဲ့မျှသာဖြစ်၍ သူတို့အတည်ပြုသော ဗုဒ္ဓဒေသနာများကို အခြားရဟန်းသံဃာတို့က မည်မျှလက်ခံ အသိအမှတ်ပြုပါသနည်းဟူသော အချက်ဖြစ်၏။
(ဂ) ထို့အပြင် သင်္ဂါယနာတင်သော ရဟန်းသံဃာသည် ဒေသနာများကို စုပေါင်းရွတ်ဆိုရုံမှတစ်ပါး စေ့ငုသေချာစွာ လေ့လာဆန်းစစ်မှု၊ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုပြုသော လက္ခဏာမရှိချေ။ သို့ဖြစ်၍ အနောက်နိုင်ငံ ပါဠိသုတေသီပညာရှင်တို့က ယခုလက်ရှိ ပါဠိပိဋကတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသမျှသာ ပထမသင်္ဂါယနာ၌ အတည်ပြုသော ပါဠိတော်များ ဖြစ်တန်ရာသည်။ ထိုတစ်စိတ်တစ်ဒေသသည်ပင် ထိုသင်္ဂါယနာတင် ပါဠိတော်များနှင့် ထပ်တူဖြစ်သည်ဟုဆိုရန် ခိုင်မာလုံလောက်သော အထောက်အထားမရှိဟု ယူဆကြ၏။ (ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ- ၂၂-၂၃)
(၄) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို မယုံကြည်မှု
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အပေါင်းအပါတစ်စုသည် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် သိစရာမှန်သမျှ တစ်စမကျန် သယမ္ဘူဉာဏ်ဖြင့် အမှန်အတိုင်း သိတော်မူသည်ဟု လက်မခံနိုင်ကြ။ သာမန်ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်သာ လက်ခံလိုကြ၏။ သာဝကတို့နှင့် ခေါင်းဆောင်နှင့်နောက်လိုက်အနေအထားမျိုးသာ ဖြစ်၏။ ထို့ထက်မပို-ဟု ဆိုကြ၏။ သူတို့၏ ရေးသားချက်အချို့ကို ကြည့်ပါဦး။
(က) အဋ္ဌကထာဆရာတို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်အကြောင်းအရာများကို ချီးမြှောက်ရေးသားရာ၌ ထိုသဗ္ဗညုတဉာဏ် ရရှိသည်ဆိုသော တိတ္ထိဆရာကြီးတို့ကို အညံ့မခံလိုသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓကို အခြားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် ခွဲခြားထားလိုသောကြောင့် ဗုဒ္ဓသည် ဘာမဆို အကြားအမြင် အသိရှိသော သဗ္ဗညုတဉာဏ် ရရှိသည်ဟု ပြဆိုကြဟန်တူ၏။
(ခ) ၀ိဇ္ဇာသုံးပါးသည် ရဟန္တာတိုင်း ရရှိသော အသိဉာဏ် ဖြစ်၏။ ဤသို့ ဆိုပါမူ ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ် တို့သည် မည်သို့ ခြားနားပါသနည်း။ (အမှန်တရား သုတေသန အမှတ် (၁) စာစောင်)
ဦးအေးမောင်ကလည်း အလားတူ ယူဆ၏။ သူ၏ ရေးသားချက်များကိုလည်း ရှုပါဦး။
(က) အဋ္ဌကထာ၌ အထူးပြဆိုထားသော ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်မှာ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဖြစ်၏။ သံယုတ္တနိကာယ်၌ ကောသလမင်းက မေးလျှောက်၍ ဗုဒ္ဓက မိမိ၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိသည်ဟု မိန့်ကြား၏။ သို့ရာတွင် ထိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်သည် မည်သို့သော ဉာဏ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြတော်မမူချေ။ အဋ္ဌကထာဆရာတို့ကမူ အမြဲထာဝရ ဘာမဆို ကြားမြင်သိရှိသော ဉာဏ်မျိုးဖြစ်သည် ဆို၏။ (ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ-၃၃၁)
(ခ) ဤဗုဒ္ဓဒေသနာအရ သဗ္ဗညုတဉာဏ်မှာ သိသင့်သိအပ်သော တရားအားလုံးကို ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ (၀ါ) ၀ိဇ္ဇာသုံးပါးကို ထိုးထွင်းသိသော ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။ ၀ိဇ္ဇာသုံးပါးသည် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ရရှိသော ဉာဏ်ဖြစ်၏။ အဋ္ဌကထာဆရာတို့သည် ဗုဒ္ဓကို ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် ခွဲခြားလိုသောကြောင့် ဗုဒ္ဓ၏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ထာဝရ အကြားအမြင်အဖြစ်ဖြင့် ဖွင့်ဆိုရေးသားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ (စာ- ၃၃၂)
(ဂ) ဤသို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန္တာတို့တွင် ဆရာနှင့်တပည့်၊ (၀ါ) ခေါင်းဆောင်နှင့် နောက်လိုက်တို့၏ နေရာကဏ္ဍ ခြားနားမှုမျိုးမှတစ်ပါး အခြားခြားနားမှုများ ရှိကြောင်း ယူဆရန် ဒေသနာအထောက်အထား မရှိချေ။ (စာ-၃၃၃)
(၅) စေတီရုပ်ပွား ကိုးကွယ်မှု
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟု ခေါ်ဆိုစရာ အမှတ်လက္ခဏာ မကျန်တော့လောက်အောင် ပရမ်းပတာ ပြောဆိုချက်များကို ရှုပါဦး။
(က) ၀တ်ထည်ဖျင်ခင်းကို သင်္ကန်းဟူ၍ မခွဲခြားတော့ဘဲ အ၀တ်ဟူ၍ တသားတည်း မြင်ကြလေပြီ၊ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ ဆံပင်တည်းဟူသော အမွေးသည် မြင်းမြီးထက်ပို၍ အနာရောဂါကို ပျောက်စေနိုင်သည်ဟူသော ဥပါဒါန်ကိုလည်း ယခုခေတ်၌ တော်လှန်ကြလေပြီ၊ ယခုအခါ၌ မြင့်မြတ်သော ဓာတ်တော် မွေတော်-စသည်တို့ကို ဘာသာရေးအမှိုက်သရိုက်များ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သေချာထင်ထင် သိမြင်ကြကုန်ပြီ။ (လူသေလူဖြစ်-၈၁)
(ခ) ဆီမီးအခိုးတိုင် ထွန်းညှိခြင်း၊ ပူဇော်ခြင်း၊ ဒူးထောက်ရိုကျိုး ရှိခိုးခြင်း၊ ကြေးစည်ခေါင်းလောင်း ထိုးခြင်း၊ ဓမ္မသီချင်း ကျူးရင့်ခြင်း၊ ဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း၊ ဆုတောင်း ပတ္ထနာပြုခြင်းဖြင့် ချဉ်းကပ်ရသော နတ်တို့ ဘုရားတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။ (လူသေလူဖြစ်-၁၂၇)
(က) မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၌ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို စေတီတည်ထိုက်ကြောင်း ၊ ဗုဒ္ဓဖွားရာ၊ ဘုရားဖြစ်ရာနှင့် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရာဌာနများသို့ ဘုရားဖူးသွားသော သူတို့သည် နတ်ပြည်သို့ ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား၏။ ဤစကားမှာ မိမိအား ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကြည်ညိုမှုကို ဆန့်ကျင်သော ဗုဒ္ဓ၏စကား သို့မဟုတ် သင်္ဂါယနာတင် ရဟန်းသံဃာ၏ စကားမဖြစ်နိုင်ချေ။ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော်လောက်မှ သုတ္တန်ပိဋကတ်ကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်သော ဆရာတို့၏ စကားဖြစ်ရပေမည်။ (ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ- ၃၃၄)
(ခ) ယနေ့ မြန်မာဗုဒ္ဓ၀ါဒီ လူထု၏ ဘာသာရေးနယ်ပယ်၌ အကျူံးဝင်သော သရဏဂုံသုံးပါး၊ ဂါထာပရိတ် ရွတ်ဖတ်မှု၊ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ပူဇော်မှု၊ ဘုရားစေတီ မွမ်းမံပြင်ဆင်မှု စသည်တို့သည် မူလဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့် အံမ၀င်ဘဲ မဟာယာန၀ါဒနှင့် ပိုမိုနီးစပ်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပေသည်။ (စာ- ၃၆၇)
ဤမျှဆိုလျှင်ပင် ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ-စာအုပ်ကြီးသည် အဓမ္မ၀ါဒများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ထားသော စာအုပ်ကြီးဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်လောက်ပြီဟု ယူဆပါသည်။
(သူတို့၏ ရေးသားချက်များ မဟုတ်မမှန်ကြောင်း၊ ဘက်လိုက်သော အမြင်များ၊ အလျင်စလို ကောက်ချက်ချမှုများသာဖြစ်ကြောင်း သိလိုပါက “လူသေလူဖြစ် ၀ါဒါနုဝါဒ၀ိနိစ္ဆယ- (ထေရ၀ါဒစွယ်စုံကျမ်း)” စာအုပ်ကြီးကို ဖတ်ရှုပါဟု ညွှန်းလိုပါသည်။)
“ရဟန်းတို့၊ သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ တရား၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ သံဃာ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ ပြောကြရာ၌ “ဤစကားသည် ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်၊ ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မမှန်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ဤအပြစ်သည် ငါတို့၌ ထင်ရှားမရှိ” ဟု မဟုတ်သည်ကို မဟုတ်သည့်အတိုင်း သင်တို့ ဖြေရှင်းရမည်။” (ဒီ။ မြန်၊ ၁။၁၁။)
မြတ်စွာဘုရားက ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ဆိုတဲ့ရတနာသုံးပါးဟာ အမြတ်ဆုံး ရတနာ လို့ ဟော့ကြားခဲ့ ဘူးပါတယ်။ လူတွေက စိန် ရွှေ နဲ . အခြားကျောက်မျက်ရတနာတွေ ၀ယ်ယူရာမှာတော့အလိမ် အညာခံရမှာသာ ကြောက်ကြလွန်းလို့သာအသေအချာစီစစ်ကြတာပါ။ အမြတ်ဆုံး ရတနာတွေကလည်း ပိုလို့ တောင် အထူးစီစစ်သင့် ပါသေးတယ်။စီစစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဂုဏ်တော်များဖြင့် စံထားကစီစစ်သင့်ပါကြောင်း…
မပြီးဆုံးနိုင်တော့သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများမှ ကင်းလွတ်ကြပါစေ…
ဒီပို့စ်က ကျနော်ရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်……..။ရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့တွေ့လို့ ဘော်ဘော်တွေလဲ ဖတ်ရအောင်
အဲသလို လှန်နိုင်လှောနိုင် ရှာနိုင်ဖွေနိုင်သူများ များများပေါ်ပါစေဆုတောင်းပါရဲ့။
Great Job! ဆက်ရေးပါဦး ကိုနန်းရှင်ရေ။ ရှာဖွေစုဆောင်းပြီးတော.။ ဘယ်ကပဲရရ ဒီလိုအချိန်ပေးလေ.လာပြီး ရေးရတဲ.စာတွေကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။
သူ့ စာအုပ်တွေ..ဘာကြောင့် ထုတ်ဝေခွင့် ရခဲ့တာလဲမစဉ်းစားတတ်..ဘူး
ဗစ်တိုးရီးယား ဘက်ခမ် ဗိုက်ထဲ ဒင်းဝင်သွားလို့ ဖြစ်မလား..ဘယ်ဗိုက်ထဲ ၀င်ပြီးလူဖြစ်မှာတုန်း
ဘယ်ဗိုက်ကိုရွေးမလဲ…ရွေးချင်တိုင်းရသလား…အမေရိကန်သမ္မတ သားဖြစ်ချင်လို့ ..အိုဗားမားကို
ြိကိုတင်ဘွတ်ကင် လုပ်ထားလို့ ရသလား..
ဘသူသာစေ..ဘသူနာစေဆိုပြီး ဘယ်ဘုရားမှ မဖန်ဆင်းခဲ့တာသေချာတယ်..
သေချာတာကတော့.ပြုခဲ့ကြတဲ့ ကံအကျိုးပေးအတိုင်း သွားကြလိမ့်မယ်ဆိုတာဘဲ
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ရဲ့စာတွေဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ် လူသေလူဖြစ်
တိတ်ခွေဇာတ်လမ်းခေတ်မှာလဲ လူငယ်နိုင်လင်းစီစဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ မင်းသားကြီးထွန်းဝေရဲ့အသံနဲ့
ဇာတ်လမ်းရဲ့အယူအဆတွေက ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တပည့်ဦးကိုကိုလေးရေးတဲ့၃၁ဘုံဝါဒဗုဒ္ဓလက်မခံချင်း ဆိုတဲ့
စာအုပ်ထဲ့ကအယူအဆတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်.. .သိပ်မကြာပါဘူး အခွေတွေပြန်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်
လူငယ်နိုင်လင်းတို့အုပ်စုလဲဆရာတော်ကြီးတွေဆီမှာ သူတို့မှားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ၀န်ခံရပါတော့တယ်….
ခုလဲကိုနန်းရှင်ရေးသလိုဆို. .ဦးအေးမောင်လဲဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ရှင်းရဘို့များပါတယ်.. .ဦးအေးမောင်ရဲ့စာအုပ်တချို့တော့ဖတ်ဘူးပါတယ် သေပြီးဘ၀နှင့်သုတေသနများ…သေသည်၏အခြားမဲ့
စိတ်ရှည်လက်ရှည် နဲ့ 
စာအုပ်များကို ရှာ ဖတ် ပြီး
ဘာသာရေးစာအုပ်မဖတ်ဖြစ်တာ အမှန်ပါ ဗျာ
သေသေချာချာလေ့လာထားတာ အလွန်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ် ၀ါဒတွေအကြောင်း တခုလောက်မေးချင်ပါတယ် ငယ်ငယ်တုန်းကရွာမှာ သုသန်ဇရပ်မှာ ဥပုဒ်စောင့်တဲ့ လူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမစောင့်တာလဲ လို့အမေ့ကို မေးကြည့်တော သူတို့ကအယူဝါဒမတူဘူး လို့ပြောပြတယ် သူတိုဝါဒကဘာလဲလို့မေးကြည့်တော့
ဆွမ်းတင်ရင် အိမ်မြှောင် စားတယ် (အိမ်မြှောင် စာကျွေးတာနဲတူတူဘဲ)
ဆီမီးထွန်း တာက ကြွက်လမ်းပြတာတဲ
လှူရင် ကုန် တယ် တဲ
ကျန်တာတွေ ရှိသေးတယ် မမှတ်မိတော့လို
အဲဒီလိုဝါဒ မျိုးကြားဖူးလား လို့ပါ
ရသေ့သူတော်စင်တွေကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ ဓုတင် ၁၃ပါးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒိ ဓုတင်အကျင့်က ကိလေသာကို
ဖျက်စီးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အတွက် မြတ်စွဘုရားက တပည့်ရဟန်းတော်တွေကို ကျင့်ချင်ရင်လည်းကျင့်နိုင်တယ်။
မကျင့်ချင်လည်း မကျင့်ပဲနေနိုင်တယ်လို့ မိန့်မှာခဲ့တာရှိပါတယ်။ အကိုပြောတဲ့ သုသန်ဇရပ်မှာ ဥပုဒ်စောင့်တယ် ဆိုတာကတော့ သောသာနိကင်္ဂ ဓုတင်ကို စောင့်တည်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သာသာနိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ သုသာန်၌သာ နေသောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ သုဿာန်၌ နေ့လေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို သောသာနိကလို့ဆိုပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို သောသာနိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကိုနန်းရှင်။
အပေါ်ကလင့်မှာ … Posted by ဆူး on Apr 12, 2011 ဆိုပြီး တွေ့ရမှာပါ..။
သေသေချာချာတော့ မသိပါဘူး..။ အခုထိ ခန့်မှန်းရသလောက်တော့.. မိုးပြာရော..မိုးဝါရော.. ဘာဖြစ်ဖြစ်…ဘာသာရေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့… ဘာအတွေးအခေါ်လာလာ. . မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်အားအကြိးဆုံးဘာသာရေးဂိုဏ်းက.. သူနဲ့မတူသူတွေကို.. စွတ်စွဲရေးတာလို့.. ကောက်ချက်ချမိတယ်..။
ဟုတ်မဟုတ်.. အပေါ်ကလင့်ခ်က စာတွေဖတ်ကြည့်သိရလိမ်မယ်..။
ကြားထဲက.. မန္တလေးဂေဇက်တောင် ထည့်ထားသေး…။
ဆိုတော့… မကြာခင်.. အခု..မန္တလေးဂေဇက်ကိုတောင် ဘာတွေများပုတ်ခတ်ကြမလဲ.. ထင်မိပါရဲ့..။
မြန်မာပြည်မှာဆို… ဓမ္မစက်က..အာဏာစက်နဲ့ ပေါင်းရိုက်ပြီး.. ကျုပ်ပါထောင်ထဲဆွဲထည့်ချင်နေသလားမသိ..။
အခြေခံဥပဒေထဲ.. လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိသည် ဆိုပဲ..။ 8O
((((ကြားထဲက.. မန္တလေးဂေဇက်တောင် ထည့်ထားသေး…။)))
သဂျီးနော်.. အခုထိ လေသံ မလျော့သေးဘူး။
ရွာထဲမှာ မောင်မိုးပြာ တို့ ဘာညာ ကွိကွတို့ ပိုစ်တွေ တင်ပြီးရေးနေတာ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်ပေမဲ့ တဖက်က ပြန်ကြည့်ရင် ဒီဆိုက်လဲ ၀ါဒဖြန့်တဲ့ အထဲမှာ ပါနေတာပဲ မဟုတ်လား။ မျက်စိတဖက်တည်း ကြည့်ပြီး ငါကွ မလုပ်နဲ့..
ဆရာကိုင်ရေ………..ကျနော်ကတော့ ဘယ်ဝါဒက ဘယ်လိုမှန်တယ် ဆိုတာထက် ဘယ်ဝါဒက ဘယ်လိုရှိ
တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့လက်တွေ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မဲ့ အမှန်
တရားတစ်ခုကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက္ခံသိရှိချင်တာ…သိရှိစေချင်တာပါပဲ……….။ပြီးတော့ စာပေစိစစ်ရေး
သဘောမျိုးတွေရယ်…………ဝါဒတစ်ခုကို လက်မခံလို့ ဝါဒီတစ်ဦးကို နှိပ်ကွပ်တာမျိုးကိုလဲ လက်မခံ
ပါဘူး…….။နောက်ပြီး ဘယ်ဝါဒီဆိုတာထက် အဲ့ဒိ ဝါဒရဲ့အဆုံးအမကို ဘယ်လောက်အထိလိုက်နာသလဲဆို
တဲ့ အချက်နဲ့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းတာသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ ယုံကြည့်မှုတစ်ခုအတွက်နဲ့ နှလုံးသားတွေ ကြမ်းတမ်းနေဖို့လဲ မလိုပါဘူး။
ဘာသာရေးဆိုတာ ဘဝတစ်ခုရဲ့ တစိပ်တဒေသလေးပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လက်ကိုင်ထားနေကြတဲ့
ဘာသာရေးတွေကြောင့် ကျနော်တို့ စိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့လောက်ညံ့တဲ့သူ ဆိုအတော်
ကိုရှားသွားမှာပါ။ကျနော်ပို့စ်တင်တယ်ဆိုတာရယ် ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာရယ်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ လေ့လာမှု
ကို ရှယ်တယ်………ဆရာတို့ရဲ့ တင်ပြမှုကို လေ့လာတယ်ဆိုတာပါပဲဗျာ……..။
ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာ၊ သဘောတရားတခုကို.. ထိခိုက်မယ်ထင်ရင်.. လွတ်လပ်စွာ..ခုခံချေပခွင့်ရှိပါတယ.်..။
ပုဂိုလ်ရေးဦးတည်မသွားပါဘူးဆိုရင်.. တော်တော်ကို..ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို.. ပြောလို့.. ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်..။
များများပြောကြမှ.. ဘေးကလူတွေ..ဖတ်နေသူတွေ..ဘာတွေဖြစ်နေကြသလည်း.. ဘာတွေဆွေးနွေးနေကြသလည်း သိမှာပေါ့…။
ကိုရင်ရေးနေတာတွေ..ကြိုက်ပါတယ်..။ ကိုးကားပြောနေတာတွေလည်း.. သဘောကျပါတယ်..။
“ရဟန်းတို့၊ သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ တရား၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ သံဃာ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ ပြောကြရာ၌ “ဤစကားသည် ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်၊ ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မမှန်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ဤအပြစ်သည် ငါတို့၌ ထင်ရှားမရှိ” ဟု မဟုတ်သည်ကို မဟုတ်သည့်အတိုင်း သင်တို့ ဖြေရှင်းရမည်။” …..
ကိုနန်းရှင် တကယ်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်ပါပဲ
နားလည်လွယ်အောင် အနှစ်ချုပ်အပြင် အာဘော်လေးပါထည့်ရေးရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်
ဘုရားရှင် ဟောတော်မူခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုး ရှိပါကြောင်း…
ခပ်သိမ်းသောဘုရားတို့၏ သာသနာတော်မြတ်တွင် ကြုံကြိုက်ကြကုန်သော သတ္တဝါအပေါင်း
၁ ။ ဥဂ္ဃါဋ္ဋိတညူ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး
၂ ။ ဝိပဥ္စိ တညူ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး
၃ ။ နေယျ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး
၄ ။ ပဒ ပရမ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး… .ဟူ၍ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိကြောင်းကို ပုဂ္ဂလ ပညတ် ပါ ဋ္ဌိတော်၊
….အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဋ္ဌိတော်တို့တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါကြောင်း..
နံပါတ် ၄ ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ်မျိုး တော့ မဖြစ်ချင် ပါကြောင်း ခင်ဗျာ ။
ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ-စာအုပ်ကြီးသည် ဘယ်ဟာတွေက အဓမ္မလဲဆိုတာကို ပညာရှင်ဆန်ဆန် သုတေသနပြု သုံးသပ်ထားတာလို့လည်း နားလည်ကြည့်ပေးကြပါဦး၊ အဲဒီလို သဘောပေါက်နေသူများလည်းရှိနေကြပါကြောင်း။
ဗမာတွေ ဒုံးမဝေးကြဖို့ ဦးအေးမောင်လို ရဲရင့်တဲ့ ပညာရှင်များ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါစေ။
kokomyo ရေ ဦးအေးမောင်တင်လား၊
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကယ်တင်ရှင် ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်း ဘယ်သွားထားမလို့လဲ၊
ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံ သူသာ မကယ်ရင် မြန်မာတွေ ဘုရားကျောင်းတွေပဲသွားရမလား၊ ဗလီပဲတက်ရမလားဖြစ်သွားဗျ သိလား။
အဲဒီတုန်းက ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေ ထွက်လာပြီး ရှင်းရဲလို့လဲ။ ကိုယ့်တရားကိုယ်ယုံရင် ထွက်ပြီး ရှင်းရဲရမှာပေါ့။
နောက်မှ ကယ်တင်ရှင် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကို မနာလိုပြီး ၀ိုင်းတွံယ်လိုက်ကြတာဗျာ။ တော်တော်ကျေးဇူးကန်း – – – – -။